Tampilkan postingan dengan label PertanianIndonesia. Tampilkan semua postingan
Home » Posts filed under PertanianIndonesia
Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid Agriculture malitere onwe n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, na gụnyere a iche iche nke taxa. Ọ dịghị ihe ọzọ 11 iche iche n'ógbè nke Old na New World tinyere aka dị ka onwe emmepe nke si malite. Ọhịa mkpụrụ na-anakọtara na-eri eri si dịkarịa ala 105.000 afọ gara aga. Ézì nọ na-akpa na Mesopotemia gburugburu 15,000 gara aga. Osikapa na-akpa na China n'etiti 13.500 na 8.200 afọ gara aga, ndị mung, soy na azuki agwa. Aturu e akpa na Mesopotemia n'etiti 13,000 na 11,000 afọ gara aga. Si gburugburu 11.500 afọ gara aga, ndị asatọ Neolithic nchoputa n'ubi ahu, emmer na einkorn wheat, hulled barley, peas, na lentil, ilu vetch, chick peas na flax e akọ na Levant. Ehi ka akpa si anụ aurochs na ebe nke oge a na Turkey na Pakistan ụfọdụ 10.500 afọ gara aga. Na Andes nke South America, na nduku na-akpa n'etiti 10,000 na 7,000 afọ gara aga, ya na agwa, Coca, llamas, alpacas, na nchọpụta mmiri. Okpete na ụfọdụ mgbọrọgwụ vegetables e akpa na New Guinea gburugburu 9,000 afọ gara aga. Sorghum na-akpa n'ógbè Sahel nke Africa site 7,000 afọ gara aga. Cotton e akpa na Peru site 5.600 afọ gara aga, na e n'adabereghị akpa ke Eurasia na onye na-amaghị oge. Na Etiti America, ọhịa teosinte e akpa na oka site 6,000 afọ gara aga.
Ke emepechabeghị, ma na islam ụwa na na Europe, agriculture e nwoghara na mma usoro na mgbasa nke akuku osisi, gụnyere iwebata sugar, osikapa, owu na mkpụrụ osisi dị ka oroma na Europe site n'ụzọ nke nd i Andalus. Mgbe 1492, ndị Columbian mgbanwe me New World n'ubi ahu dị ka maize, poteto, ụtọ nduku na manioc ka Europe, na Old World n'ubi ahu dị ka ọka wheat, barley, osikapa na turnips, na anụ ụlọ gụnyere inyinya, ehi, atụrụ na ewu na America . Irrigation, akuku adiana, na fatịlaịza e ẹkenam-adịghị anya e Neolithic mgbanwe na mepụtara ukwuu n'ihu na n'oge gara aga 200 afọ, malite na nke British Agricultural mgbanwe. Ebe ọ bụ na 1900, ugbo na mepụtara mba, na a nta ruo n'ókè na-emepe emepe, nke hụrụ nnukwu adahade ke arụpụtaghị dị ka mmadụ ọrụ e dochie anya ígwè ọrụ, ma nyere site sịntetik nri, pesticides, ma nhọrọ ozuzu. The Haber-Bosch usoro kwere njikọ nke ammonium nitrate fatịlaịza na ihe ulo oru ọnụ ọgụgụ, nke ukwuu na-amụba akuku zaa. Modern agriculture welitere ndọrọ ndọrọ ọchịchị gụnyere mmiri na mgbaru ebe obibi, biofuels, genetically gbanwetụrụ ntule, tariffs na ugbo ego, na-eduga ọzọ na-eru nso dị ka organic ije. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid
Mmepeanya bụ ndị Agricultural Neolithic mgbanwe; dị ka H. G. Wells kwuo ya, mmepe anya bụ akọ ugbo njuputa. Na N'ezie nke akụkọ ihe mere eme, mmepe anya coincided na ohere na-eme nri ebe dị ka The tụụrụ mpekere onwa, na-ekwu, sị kpụrụ tumadi na circumscribed ugbo ala. The Great Wall nke China na ndị Roman alaeze nke limes (ala) demarcated otu n'ebe ugwu n'ókè nke cereal agriculture. Nke a cereal belt nāzù mepee emepe guzobere Axial Age na ejikọrọ site Silk Road.
Ndị Ijipt oge ochie, onye ọrụ ubi dabeere kpam Naịl, chi osimiri, kpọ isi ala, na elu ya na a oké ukwe. The Chinese alaeze ukwu ikpe agbala ọtụtụ edicts n'ikwu, sị: Agriculture bụ ntọala nke a Alaeze Ukwu. Ijipt, ndị Mesopotemia, Chinese, na Inca Ndị eze ukwu onwe ha kọọ ihe emume ubi iji gosi na ihe atụ iji onye ọ bụla.